Tsy misy olona maniry ny hijaly, tsy nitady fijaliana i Jesoa na misatry antsika hijaly sanatria, mety ho fahadalàna manko ny Azy sy izay manaraka Azy raha izany. Ny nimasoany dia ny haneho ny endrik’ilay Andriamanitra nivavahan’Israely, ka niezaka ny hampifanaraka ny fiainany amin’ny sitrapon’ilay Ray izay naniraka Azy. Izany fampifanarahana ny fiainana amin’ny sitrapon’Andriamanitra izany dia tonga fanafintohinana ho an’ireo efa zatra niliba sy nanararaotra ny “asan’Andriamanitra” hanangonana harena sy voninahitra.
Atsidik’i Md Joany amin’ny Evanjely fa tsikelikely ny fahamatoran’izany fanapahan-kevitr’i Jesoa hisedra ny fankahalan’ny Jody izany. Tsy nety nankany Jodea Izy satria nitady ny hahafaty Azy ny Jody, hoy i Joany. Mankahery antsika izany fanambarana izany satria mampiseho ny maha-olombelona mitovy amintsika amin’ny zavatra rehetra an’i Jesoa. Ambaran’i Joany anefa fa tsy tahotra loatra akory no antony tsy niakaran’i Jesoa tany Jodea (Jerosalema) mba hifanehatra amin’ny Lohandohan’ny Mpisorona sy ny Mpanora-dalàna, fa satria tsy mbola tonga ny fotoana (kairós). Tsy ny hiseho ho mahery fo sanatria, na hanehoana ny tanjaka no anaovana tolona fa ny hikatsaka sy hiaro ny voninahitr’Andriamanitra ka hijoroana ho vavolombelona hatramin’ny farany, tsy noho ny herin’ny tena fa noho ny fitokosana Aminy.
Ho haintsika anie ny handray ny fampianaran’i Jesoa ka hialantsika amin’ny fomba taloha ho amin’ny fianam-baovao, izany hoe handaozantsika ny toetra ratsy mety nahazatra ka hanamasinana sy hanavaozana ny fo (vavaka aorian’ny komonio), tsy noho ny ambom-pontsika fa noho ny herin’ny Sorona Masina atolotra (Vavaka fanolorana).